အလံသစ် နဲ့ယတြာ ညွှန်ကြားချက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » အလံသစ် နဲ့ယတြာ ညွှန်ကြားချက်
အလံသစ် နဲ့ယတြာ ညွှန်ကြားချက်
Posted by ဂျစ်စူ on Oct 22, 2010 in Myanma News, News |6comments
MM new flag
ယမန်နေ့က နိုင်ငံတော် အလံသစ်လွှင့် တင်တဲ့နေရာမှာ ပါဝင်တဲ့သူတွေဟာ အထက်အာဏာပိုင်တွေက ဗေဒင်ကိန်ခန်းအတိုင်း အချိန်နာရီ၊ နေ့သင့်နံသင့် မွေးနေရှင်တွေကအစ အတိအကျ လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ အမိန့်စာကို ကြံ့ဖွံ့တွေ အကြားမှ ယခင်ကတည်းက လျှို့ဝှက်ဖြန့်ချိထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
၁၂။ အလံဟောင်းကို နိုင်ငံတော်အလံ ဥပဒေနှင့်အညီ တာဝန်ရှိသူများက မီးရှို့ဖျက်ဆီးရမည်။ ( အဘညွှန်ကြားချက် – မီးရှို့လျှင် အိုးအလွတ်၊ ပုံးအလွတ်ထဲတွင်ထည့်၍ ပြာကျအောင် မီးရှို့ပါ၊ ပြီးလျှင် ပြာကိုမြစ်ထဲ မျှောပါ။
မြန်မာပြည် အင်္ဂလိပ်လက်အောက်ကနေ လွတ်လပ်ရေးရယူခဲ့စဉ်ကလည်း ၁၉၄၈ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၄ ရက် နံနက် ၄ နာရီ ၂၀ မိနစ် မှာပဲ ရယူပြီးတော့ ယူနီယံဂျက်အလံအစား မြန်မာ့နိုင်ငံတော် အလံကို ပြောင်းခဲ့ပါတယ်။
ဒီလို နံနက်စောစော ချမ်းချမ်းစီးစီးအချိန်ကြီးမှာ လွှဲပြောင်းယူခဲ့လို အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေကတောင် တခြား အချိန်ပြောင်းဖို့ ပြောတယ်လို့ သိရတယ်။
ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ ခေါင်းဆောင်ကြီးများကလည်း ဒီအချိန်က နေ့သင့်နံသင့် အချိန်အခါကောင်း ဆိုပြီးပြောတော့ အင်္ဂလိပ်လူကြီး မင်းများက ငါတို့က အိပ်ရေးပျက်ရင် တကြိမ်ပဲ၊ မင်းတို့က တသက်လုံး အိပ်ရေးပျက်ရမှာလို့ ပြောခဲဖူးတယ်လို့ ကြားဖူးပါတယ်။
ဒီလို နေ့သင့်နံသင့် လုပ်ပြီးကတည်းက ဖြစ်လိုက်တဲ့ ပြည်တွင်းစစ်တွေလည်း အခုအချိန်အထိ မပြီးသေးပါဘူးဆိုတာ အများအသိပါပဲ။
စောက်ရူးတွေ မသေနိုင်အောင် ယတြာလုပ်လို့ရလား?
ဟုတ် တယ် …. ဘိုး တော် တွေ ဗေဒင် ဆရာ တွေ က လဲ သေ ပဲ မ သေ နိုင် ၀ူး။ မြှောက် .. မြှောက် ပေး နေ တယ် …
သူတို့ ကိုးကွယ်နေတဲ့ ဘိုးတော်တစ်ယောက်ရှိတယ်တဲ့….ဦးသန်းရွှေလက်စွဲလေ….
သူအခါပေးလို့ ပြုတ်တဲ့ သေတဲ့ အရာရှိတွေတောင်မနည်းတော့ဘူးဆိုပဲ ကြားမိတာလေးပြောပါတယ်..
အလံပြောင်းရင် အလောင်းတောင် ပြန်မရဘူးမြန်မာနိုင်ငံ အလံသစ် ပြောင်းခြင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဧရာဝတီသတင်းဌာနရဲ့ ဆွေးနွေးခန်းပါ။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ဒေါင်းယူထားပြီး ပြန်တင်ထားတဲ့ ဆွေးနွေးခန်း mp3 ဖြစ်ပါတယ်။နားထောင်ချင်ရင်..Mefiafire Multiuploadsonsonlay multiply